Shirkadda Twitter oo yeelatay maamul cusub soona saartay amaro culus | Entertainment and News Site
Home » News » Shirkadda Twitter oo yeelatay maamul cusub soona saartay amaro culus
Shirkadda Twitter oo yeelatay maamul cusub soona saartay amaro culus
daajis.com:- Shirkadda Twitter yaa ku dhawaaqday balaarinta siyaasaddeeda macluumaadka gaarka ah iyadoo mamnuucday wadaaga sawirada gaarka ah iyo fiidiyowyada dadka ogolaansho la’aan.
Haddii aad isticmaashid sawir ama muuqaal video ah amar la’aan qofkii soo geliyay twitterka uuna qofkaa ku dacwad kaa gudbiyo shirkaduu waxa ay kaa tirtiraysaa sawirka ama muuqaalka aad fasax la’aanta isticmaashay.
Arrintan ayaa qeyb ka ah isbedel lagu sameynayo habka uu u shaqeeyo Twitterka kadib markii uu is casilay madaxii hore ee shirkadda.
Isticmaalayaasha ku xad gudba xeerka cusub waxa laga yaabaa in si joogto ah loo mamnuuco.
Xeerka lagu daray waxa u dheer siyaasadda macluumaadka gaarka ah ee jirta oo mamnuucaysa wadaagga macluumaadka gaarka ah ee dadka, sida lambarrada taleefannada, ciwaannada, iyo aqoonsiga.
“Waxaa jira walaac isa soo taraya oo ku saabsan si xun u isticmaalka warbaahinta iyo macluumaadka aan laga helin meelo kale oo online ah oo ah qalab lagu dhibaateeyo, lagu cabsi geliyo, laguna muujiyo aqoonsiga shakhsiyaadka,” ayuu soo qoray Twitter.
“Wadaagista warbaahinta gaarka ah, sida sawiro ama muuqaalo, waxay ku xad-gudbi kartaa sirta qofka, waxayna u horseedi kartaa dhaawac maskaxeed ama jireed.”ayaa lagu yiri warbixinta.
Parag Agrawal, oo 45 jir ah, ayaa loo magacaabay maamulaha cusub shirkadda Twitterka,maalin kadib markii maamulaha guud Jack Dorsey uu ku dhawaaqay inuu ka tagayo Twitter-ka. Parag Agrawal,ayaa ahaa madaxa tignoolajiyada ee shirkadda tan iyo 2017.